यस रेन्डरले भर्खरको आईफोन इलेवन र आईफोन इलेक्सन म्याक्स लीक देखाउँदछ आईफोन समाचार
यस रेन्डरले भर्खरको आईफोन इलेवन र आईफोन इलेक्सन म्याक्स लीक देखाउँदछ
परी गोन्जालेज | | धेरै
आईफोन टर्मिनल हो जुन वार्षिक रूपमा अद्यावधिक गरिएको छ तर तिनीहरूको अफवाहहरू वर्षको सुरूमा सुरू हुन्छ। सेप्टेम्बर सम्म हामी नयाँ टर्मिनल देख्दैनौं जुन आईफोन XI को आशा गरिन्छ। यद्यपि हजारौं डिजाइनरहरूले आफ्नो कल्पनालाई उजागर गर्न शुरू गरे जुन टर्मिनलले अहिले सम्म प्रकाशित चुहावटसँग कसरी देख्न सक्दछन्।
स्टीव एच.एम.सी.फ्लाइले K के रेन्डर बनाएको छ जुन को समाचार देखाउँदछ आईफोन XI र XI अधिकतम, अहिले सम्म प्रकाशित सबै जानकारी स .्कलन गर्दै। Ute म्यूट »बटन, पुन: tricameral जटिल को गोलाकार र notch र फ्रेम को एक धेरै महत्त्वपूर्ण घटाउन को redesign हाइलाइट गर्दछ।
यो आईफोन XI र आईफोन XI अधिकतम हुन सक्छ
यो याद राख्नु पर्छ कि यी दुई मोडेलहरू बीच मौलिक भिन्नता हो स्क्रीन आकार। सानो भाईले 5,8..6,5 इन्चको ओएलईडी स्क्रिन प्रस्तुत गर्ने क्रममा आईफोन इलेक्सन म्याक्सको XNUMX.-इन्चको स्क्रिन आईफोनको हालको परिवार जत्तिकै आयाममा राख्न सक्ने छ।
यदि हामी प्रकाशित गरिएको रेन्डरको छविहरूको विश्लेषण गर्छौं भने म्याकफ्लाइ हामी त्यो देख्छौं डिजाईन उस्तै रहन्छ हामीले विगत केही हप्ताहरूमा हेर्दै आएका अन्य धेरै अवधारणाहरू भन्दा। हामी जोड दिन्छौं, सबैभन्दा माथि, तीन चेम्बर जटिल पछाडिबाट कम्प्लेक्समा थोरै राहत हुने थियो र साथै, उनीहरूलाई गोल सुझावहरूको वर्गमा राखिनेछ।
यदि हामी सहि पक्षको विश्लेषण गर्छौं भने हामी यो देख्छौं «म्यूट» बटन यो पछाडि प्यानल संरचना आफैंमा खोदिएको छ र नयाँ कम्पोनेन्ट एकीकृत छैन। यस प्रणालीले हामीलाई पहिलो आईप्याडको सम्झना गराउँदछ जुन यस प्रणालीसँग थियो। यस तरीकाले हामी यस प्रकार्यलाई माथिबाट तल दायाँको सट्टा दायाँबाट दायाँ सक्रिय गर्दछौं किनकि हामी सधैंका लागि गरिरहेछौं।
बीचको भिन्नता रेन्डरमा आईफोन XI र XI अधिकतम सराहना गरिएको छैन, किनभने त्यहाँ स्क्रीन आकार भन्दा बाहिर कुनै छैन। सायद त्यहाँ सुधारहरू छन्, तर रेन्डरिंगमा हामी के मोल गर्छौं उपकरणहरूको बाह्य डिजाइन हो र हार्डवेयरको होइन। यो सम्भव छ कि जटिल क्यामेरा प्रणाली पनि परिवर्तन हुनेछ, तर हामीले लीक हुने बित्तिकै यी सबैको विश्लेषण गर्नुपर्नेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन » धेरै » यस रेन्डरले भर्खरको आईफोन इलेवन र आईफोन इलेक्सन म्याक्स लीक देखाउँदछ
भगवान र भर्जिन द्वारा !!!! कस्तो कुरूप कुरा !!! म एप्पल प्रति वफादार छु र यस बर्ष5बर्षको लागि हरेक बर्ष जस्तै, म नयाँ मोडल खरीद गर्नेछु, तर मैले अर्को टिप्पणीमा भनेझैं म इमानदार हुन चाहन्छु। त्यो ट्रिपल क्यामेरा भयानक छ। म आशा गर्दछु कि यो यहाँबाट सुधार आएको छ जब यो बाहिर आउँछ। अर्को सम्भावना यो हो कि प्राकृतिक एक फोटोमा जस्तो कुरूप छैन। म यो विचारको साथ आफूलाई कन्सोल गर्न चाहन्छु।
एप्पल व्यापारिक सामान अमेजन गोदामहरु बाट stolen 100 भन्दा बढी चोरी
Youtube यसको 'मूल' को साथ विज्ञापनको साथ निःशुल्क मोडेलमा जान्छ